ဂလောက် ဂလောက် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » ဂလောက် ဂလောက်	42
Posted by ဇီဇီ on Aug 27, 2015 in Creative Writing, Myanmar Gazette | 42 comments
ရွာထိပ်မှာ အလင်းဆက် တစ်ယောက် ကောက်ရိုးမီးရှို့ နေတာ တွေ့ကြတယ်မို့လားးး
အဲလာကို တဂျီးက မီးလောင်ရာ လေပင့်ပြီး အင်ဇာဂီကို အောက်ဆီဂျင်ဘူး နဲ့ လွှတ်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာ ကောက်ရိုးမီးတောက်အားကြီး ဟုန်းဟုန်းတောက်လောင်ပြီး စလုံးမှာရှိတဲ့ ခင်ဇော် ရဲ့ ခေါင်းကို မီးစွဲပါတော့တယ်။
မနက်ကမှ ကိုယ်ကလည်း သတင်းတွေ လိုက်ဖတ်ပြီးလျှာလျှာရှည်ရှည်…
မိန်းမ သူခိုးတွေ အတော် အလုပ်ဖြစ်လာပြီ ဆိုပဲ..
နာ လည်းး နာ့ရုပ်နာ့ရည် အားးကိုးးပြီးး
ရွာပြန် ဓားမြတိုက်ဖို့ စဉ်းစားမှ..!!! ဆိုတဲ့ စတေးတပ်လည်း တင်မိပါတယ်။
ခင်ညားက ဓားမြလုပ်မဲ့သူမို့ အလှူခံပေး ဆိုပဲ။
အာ့ကြောင့် ရှေ့မျက်နှာ နောက်ထားး
နောက်ရောက်ပြီးသား အဲအဲ ဆံပင် ရှေ့ပို့ပြီး သကာလ အလှူခံဖို့ သထိန်းတွေ နာမည် စ ရွတ်ပါတော့မယ်။
ဘုရား တရားသာ အာရုံပြုပေရော့။
မစ်တာရှင် ရွာသူရွာသားများကလည်း လိုတဲ့ နာမည် ချောက်ချ အဲလေ သတိပေးကြပေါ့နော့။
ကိုယ် ရှာထားတဲ့ ကိုယ့်ပိုက်ဆံ အလကားယူမယ် မကြံနဲ့။ တန်အောင် ပြန်ပေးရမယ် ဆိုလား ဘာလားး (အဟိဟိ၊ စကားလုံးမတူဘူး၊ မှတ်မိသလိုပြန်ရေးတာ)
အလကားပေးရတယ်လို့ သဘောမထားပါနဲ့ လို့။
စာရင်း အရ ရှေ့ဆုံးက…
တဂျီး က အစိမ်း ၁၀ဝ
ဟောင်ကောင်ကျောက် က အစိမ်း ၁၀ဝ
သများကတော့ အစားအသောက်ပုံမဟုတ်လို့ ၅၀ဝ၀ဝကျပ် (စိတ်ကြီးတာ။ ဟိ) ဖြစ်ပါတယ်။
အလုပ်ရော အကိုင်ရော ပိုင်ရှင်များ အဲလေ လုပ်ငန်းပိုင် ကိုကိုများဖြစ်ဖြစ်ကြသော…
၂) ယောက်ခမဆာ နဲ့ ကိုကြီး အမတ်မင်း
၃) ကိုကိုနုထွား အမ်ဒီကြီး
၄) ကျောက်မျက်ဆိုင်ရှင် ကိုလုလင်
၅) ဓာတ်ပုံတိုက်ပိုင်ရှင် မှော်ဆရာကြီး
၆) ခရီးသွားလာ ထွာဘဲ ကထူးဆန်း
၇) ကဘာလှည့် ဘဖော စတဲ့ သူတွေကို ဓားမြတိုက်လို့ အပြီးမှာ
၁) ကတ်ပုတိန်ကြီး အသဲ မွမွသဲ
၂) ဆေးတိုက်ပွဲရုံ အာတီဒုံ
၃) ဟိုတယ်ပိုင်ရှင် ချစ်မမ
၄) ရွာတော်ရှင် ဆူးမမ
၅) ထွားဘယ် အေဂျင်စီပိုင် မွမွနို စတဲ့ မမတွေကို အနုကြမ်းစီးချင်ပါတယ်။
နာမည် တတ်မပြေါလို့ စိတ်မကောက်ကြပါနဲ့။
ဘယ်သူမဆို ရွာကို ချစ်တဲ့ ဘယ်သူမဆို ပါဝင် လှူဒါန်းနိုင်ပါတယ်။
ဓားမြတိုက်တာမို့ ကိုယ့်ကို စိတ်မဆိုးနိုင်တဲ့သူတွေ နာမည်တတ်ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။
ကလင်ဒါထွက်ရင်တော့ အလှူရှင်တွေ အတွက် ကလင်ဒါ ဘယ်နှခု ရမလဲ ဆိုတာ အင်ဇာဂီကို မေးကြပါ။
ဟိဟိ ကိုယ့်ရဲ့ လုပ်ငန်းကြော်ငြါတွေထည့်သွင်းချင်လည်း ရပါတယ် တဲ့။
ဘယ်ရွေဘယ်မျှတော့ နောက်မှ ပြေါပါမယ်ဆိုလို့ အလှူခံဖလားလေး ဂေါက် ရင်း နိဂျုံးခုတ်လိုက်ရပါတယ်။
အောင် မိုးသူ says: ငွေအားမရှိလို့ ဥာဏ်အားနဲ့ကူထားပြီးပြီနော်… ဂလောက် ဂလောက်
ဇီဇီခင်ဇော် says: ကူကြပါ ကယ်ကြပါ။
တတ်အားသရွေ့လေး ထည့်ဝင်ကြပါ ခင်ညာ ရွာအမှတ်တရမို့ပါ။
weiwei says: နံမည်မတပ်ထားလို့ စိတ်မဆိုးပါဘူးလို့ …
ဇီဇီခင်ဇော် says: ဓာတ်သေဆရာတွေမို့ ချမ်းသာပေးတယ်မှတ်ပါ။
ဒါမဲ့ သဒါ သလောက်တော့ ဓာတ်ပုံတွေပေးရမယ်။
Foreign Resident says: ” ၇) ကဘာလှည့် ဘဖော စတဲ့ သူတွေကို ဓားမြတိုက်လို့ အပြီးမှာ ”
ဘဖော ကို ဘယ် နေရာ / ဘယ် Post မှာ ဓားမြတိုက်ခဲ့တာတုန်း ။
မ ဖတ်မိလိုက်လို့ ပြန်ဖတ်မလို့ ။
ရွာ့အရေးဆိုတော့ လှူတာတော့ လှူရမှာပေါ့ ။
ဒါပေမယ့် အဘက အခု သြဇီမှာနော် ၊
ရွာသူား တစ်ယောက်ယောက်က စိုက်ထားမှ ဖြစ်မှာ ။
အခုလည်း ရေဘေးအတွက် ရွှေပါရမီ ကို ငါးသိန်း ၊
အဘိဓမ္မာစာပြန်ပွဲ မှာ ဆွမ်းကျွေးဖို့ တစ်သိန်း ဆိုပြီး ၊
ပါးစပ် နှင့်ဘဲလှူပြီး ၊ ရန်ကုန်က သူငယ်ချင်းတွေက စိုက်ထားရတယ် ။
ခုနေသာ အဘ ဂန့်သွားရင် သူတို့အိမ်မှာ နွားသွားဖြစ်နေဦးမယ် ။
” အလုပ်ရော အကိုင်ရော ပိုင်ရှင်များ အဲလေ လုပ်ငန်းပိုင် ကိုကိုများဖြစ်ဖြစ်ကြသော ”
အဲ တစ်ခု ပြောပြရဦးမယ် ။
အဘက အခု ၊ အလုပ်လက်မဲ့ ဘဝ ရောက်နေတာရယ် ။
မဟေသီ့ လုပ်စာ ထိုင်စားနေရတဲ့ မျက်နှာမွဲ ဘဝ ရယ်ပါ ။
ဇီဇီခင်ဇော် says: ခု ဓားမြတိုက်တာလေ။
နာမည်တပ်လိုက်ပြီ ဆိုတာ အာ့ ဓားမြတိုက်တာပဲ။
အလုပ်မရှိပေမဲ့ အကိုင် ရှိပြီးတာပဲ အဘရယ်။
ဇီဇီခင်ဇော် says: ဖတ်ပြီး။ ထုတ်ရန်သဘောတူ။
ရွာသူရွာသား ဂရုပုံ မသုံးစေလိုပါ။ တတ်နိုင်ရင် အနီးကပ်လူပုံ မည်သူမဆို မပြစေလိုပါ။ ဓါတ်ဆရာ ပန်းချီဆရာ ကဗျာပိုင်ရှင်များ သဘောတူပါက သူတို့လက်ရာများနှင့်အတူ ပုံတွဲဖေါ်ပြတာအကြောင်းမဟုတ်ပါ။
ခေါက်ထားခံရမည့် အဖုံးအား ဂဇက်လိုဂိုသာထည့်လိုက်တော့ တမျက်နှာစာ သက်သာပေမပေါ့။
မြစပဲရိုး says: မောင်မောင်ကြွပ် ကို ပြောဖို့ ဝင်အလာ ဂလောက်ဂလောက် နဲ့ တိုး ရော။
ဒီမှာလဲ နာမည်အပါဝူး။ ဟိ။
ဒါတော့ ဝမ်းနည်းဝူး၊ စိတ်ဆိုးဝူး။
ဒီတစ်ခေါက် မပါနိုင်တာကို ခွေးလွှတ်ပါ။
အိမ်ပေါ်က ကန်ချ လိမ့်မဲ။ lol:-)))
မြစပဲရိုး says: ဆိတ်အားဖြင့် အားပေးပါမယ်။ :-)))
ဇီဇီခင်ဇော် says: ခိခိခိ။ စာသွားကျက်ချည်လေ။
သများရဲ့ အစားအသောက် ကလင်ဒါမှ ပါ။
မြစပဲရိုး says: သံယောဇဉ် အမျှင်တန်း ကို ရှင်ခန်းဘယ်သူဖြတ်နိုင်ပါ့။ :-)))
@QUIL@ says: ကျုပ် ပုံစုပေး ဆိုလို့ ပုံစုပေးမယ်…
ဆက်ဆက် – ပလန်နာ
အောင်မိုးသူ – ဒီဇိုင်နာ
မွဝေ – ငွေစာရင်း
မဇာယိ – ဓားပြဗိုလ်
မိမိဂီ – ဖိုတို အော်ဂနိုက်ဇာ
ဇီဇီခင်ဇော် says: နာ့ ကို လူမုန်းတဲ့နေရာ ထားတယ်လားးး
အစားအသောက်မဟုတ်ရင် ဘာမှ မကူချင်ဘူး ပြေါထားတာကို။
Wow says: ချစ်ချွိက အလှူခံမှာ ကျော်ခဲ့တော့
ချစ်မောင်ဂလေးက မမဂျီးဂို ပြတ်ဂဒိန် စဆုံး မော်ဒယ်သတ်မှတ်လိုက်… ဟိ ဆက်ဆီမော်ဒယ်ဒွေ မျောက်ရည် ဘူးသီးလုံးလောက် ကျသွားစေရမယ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12397
ဇီဇီခင်ဇော် says: နာမည် တတ်မပြေါလို့ စိတ်မကောက်ကြပါနဲ့။
Alinsett @ Maung Thura says: အလှူရေစက် လက်နဲ့မကွာပါသော…. ဦးကြောင်ကြီး ထံမှလည်း အလှူခံပါတယ်…
အသာတကြည် အလှူခံလို့မှ မရရင် ဒမြတိုက်ပါ့မယ်…
မွသဲ ( 17082011 ) says: ဟမရေးရွာထိန်းမဝင်မဝင်နဲ့ ဝင်မဲ့ဝင်မိတော့ ဒမြပိုစ့်နဲ့တိုး အဲ့လေ အလှုခံပိုစ့်နဲ့တိုးနေဘာကောဟလား။ ဂစ် ခိခိ ရောင်းမှာလား အရဂါးပေးမှာလား ရောင်းရငွေကိုတနေရာလှုမှာလား။ တညားလဲလှုဘာ့မယ် ဝေ့ကိုပေးရမှာလား
ဇီဇီခင်ဇော် says: အာ့ သူတို့ မေးး
naywoon ni says: အဲ့ ဓမျ အဲ့အဲ့ အလူခံဒဲ့ အိန်​တာနက်​ပိတ်​ပြီး မသိချင်​​ယောင်​​ဆောင်​​နေမှ ဒီအလူခဲက မြို့ထဲလာတဲ့ အလူခံလို တချင်း​တွေ အကျယ်​ကြီး မဆိုကြလို့​တော်​​သေးရဲ့ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12397
မြစပဲရိုး says: တကယ်ဆို
ဒါဟာ အလှူခံတာ မဟုတ်ဘူး။
အရင်းကို ပြန်ဆပ်ပြီး အမြတ်ထွက်အောင် လုပ်ပြလို့ ရတယ်လို့ challenge မလုပ်ရဲကြဘူးလား။
သာမာန် မြို့နယ်အသင်း ပြက္ခ္ခဒိန် လို ဆိုရင်တော့ လဲ ဒီလို ဒီလို အရင်းတောင်မကျေ နိုင်တဲ့ ရှေးရိုးလမ်းဟောင်း ကြီး သာပါ့။
ဒီ လို အလွတ်ကောက်ရတာ မျက်နှာပူလို့ လူတိုင်းကိုမပြေါရဲပဲ ကြော်ငြါ ပါ ထည့်ချင်လောက်မဲ့သူတွေ ရွေးပြေါတာပါ။
မြစပဲရိုး says: Thanks My dear.
Just reminding about Responsibility and Creativity.
Ma Ma says: မနက်ဖန် ပုံနှိပ်တိုက်ကို စုံစမ်းပြီး အကျိုးအကြောင်းပြောပေးမယ်။
ဇီဇီခင်ဇော် says: ကျေးကျေး အများကြီးပါ ချစ်မ
ကထူးဆန်း says: နံမည် တပ် ဓား ပြ တိုက် ခံ ရ တော့ လည်း
ဆိတ်ဆိတ် နေလို့ လဲ မရ
ပြေး စ ရာ ခ ရီးလဲ ရှိတော့ဘူးပေါ့ ..
ဓါးပြ ဗိုလ်နောက် သိမ်းသူ က ဘူလဲ ??? မွ ဝေ လား … Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12397
ဇီဇီခင်ဇော် says: မွဝေ ကို လွှဲပေးပါ။
Mike says: .ဂလောက်…ဂလောက်
.အသာငြိမ်နေမှပါ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12397
ဇီဇီခင်ဇော် says: ငြိမ်နေအူးးး
သများ ပြဂဒိန်ကျ အသုပ်စုံ စပွန်စာပေးရမယ်နော်။
black chaw says: ပြက္ခဒိန် ထွက်လာရင် အားပေးပါ့မယ် ဗျာ…။
ဇီဇီခင်ဇော် says: ကျေးကျေးပါ ကိုကြီးဘက်။
Novy says: ဂလောက်…ဂလောက်
ဇီဇီခင်ဇော် says: ပြန်ပေးရင် မုန့်ပြန်ကျွေးမှာ လားငင်။
Ma Ei says: ရွာကို ချစ်တဲ့ ဘယ်သူမဆို ပါဝင် လှူဒါန်းနိုင်ပါတယ် လို့
ချစ်ရတဲ့ ညီမလေးက ဂလောက်ဂလောက် ဆိုမှတော့
ပါရမှာပေါ့ နော်… လက်နှေးပါဘူး ….
ဇီဇီခင်ဇော် says: အာ့တွေ ချစ်ရတာ။
@QUIL@ says: အဘဖော
မွဇာယိ … အပ္ပဒိတ် ဆက်ဆွဲပါအူးးးး..
ကိုကိုတွေ မမတွေ ဘယ်လောက် မှန်းထားတုန်း ပြေါပြကြပါ။
ဒါမှ မဟုတ် သများ မှန်းထားတဲ့ အမောင့်တွေ ပြေါပြရမားငင်။
kai says: “ဂလောက်..ဂလောက်”ဆိုတာက.. ငွေဖလားမှာ.. အကြွေစေ့ထည့်.. ခလောက်ရင်မြည်တဲ့အသံ…။
ယူအက်စ်မှာ.. ၁ဆင့်စာအကြွေစေ့လေးတွေ.. ပေါမှပေါ…။
အိမ်မှာ.. ဟိုနားချ.. ဒီနားပစ်နဲ့…။
အဲဒါလေးတွေနဲ့.. non profit တခုခုလုပ်ဖို့.. အကြံရှိပါကြောင်း..
ဇီဇီခင်ဇော် says: ဂလောက်ဂလောက်ဆိုတာ
ရွှေ တစ်ကျပ်သား ပြါးတွေ ထည့်ခလောက်ထားတာဂျ။
လုံမလေးမွန်မွန် says: ဂျုံဒွဲပုံလေးတွေ မထည့်ချင်ဝူးလား.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12397
ဇီဇီခင်ဇော် says: ဂျုံဒွဲ လုံး လှူမှာရား
Alinsett @ Maung Thura says: ဂျုံဒွဲပုံ ထည့်မယ်ဆိုရင်..အနော်နဲ့ ဖွေးဖွေး ပုံတွေ လည်း ရှိပါလယ်….
.ဖွေးဖွေးနဲ့မှ အဆင်မပြေလည်း… ဒေါ်ဖွားမေနဲ့ အနော်..တွဲရိုက်ပြီး… ထည့်ပါ့မယ်.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.